Abaphuza abanamanzi → Ukuphuza imithombo yamanzi • Ukuphuza ama-spas
Sinikeza abaphuza amanzi okuphuza imfundo, imboni yeHoReCa, ezempilo, ikhaya, amahhovisi, izikhungo zomphakathi, amapaki, izikhungo zemidlalo nabanye abaningi.
Ukuqinisekisa ikhwalithi amanzi okuphuza kuyindaba yemizamo yezikhungo eziningi nabakhiqizi bezinhlelo ezikhethekile ezisetshenziselwa ukwelashwa kwamanzi.
Amanzi okuphuza kumele abe mahhala kuzo zonke izingqimba zama-pathogenic nama-microelements ayingozi futhi kufanele abe nokunambitheka okulungile.
Amanzi okuphuza ephezulu iqinisekisa ukuklanywa okufanele, ukwakhiwa nokusetshenziswa kohlelo lwamanzi okuhambisa indle namanzi endaweni yokwakha noma indawo yasemadolobheni, futhi kugwenywe ukuminyanisa kwamanzi, izinga lokushisa okufanele lingabi ngaphezu kwama-25 ° C.
Ukuphuza imithombo yamanzi
Uma kunesidingo sokuhlinzeka ngokufinyelela kumanzi okuphuza inani elikhulu labantu, kufanelekile ukubheka isisombululo sanamuhla nesiphephile, njengokuphuza imithombo yamanzi.
Iziphuzo ezinje zingamadivayisi ahlanzekile futhi asebenziseka kalula anikezela ngamanzi okushisa abandayo noma asekamelweni futhi alungele izikhala ezisetshenziswa yinani elikhulu labantu. Lesi sixazululo sisetshenziswe isikhathi eside kwamanye amazwe futhi silungele amahhovisi, izikole, izitshalo zezimboni, iziteshi zikaloliwe nezikhumulo zezindiza, i.e. nomaphi lapho kunesidingo sokuhlinzeka ngamanzi okuphuza emaqenjini amakhulu abantu.
Mayelana nesifo esiwumqedazwe we-COVID-19, sizibuza ukuthi, kanjani ngokuya ngemihlahlandlela yeSanepid futhi nokunakekela impilo yezakhamizi, ukuxazulula inkinga yokugcwalisa ukomela kwabantu ezindaweni zasemadolobheni nasezikhungweni zomphakathi ngendlela ephephile.
Bheka futhi: Iziteshi zokubulala amagciwane futhi Izinhlelo zokumisa amagumbi okuhlanza zisebenzisa indlela eyomile yenkungu
Lapho sifuna amadivaysi alula nokuhlanzeka ongawasebenzisa, futhi mhlawumbe angenazandla, izinkampani ezikhiqiza abaphuzayo nabaphuza imithombo yamanzi zinikeza isixazululo, ukusetshenziswa kwaso okuqinisekisa inhlanzeko ephezulu.
Lapho ukhetha imithombo yokuphuza yasentwasahlobo kepha kunezinto ezimbalwa okufanele uziqaphele
Sicabanga, Yebo, ukuthi amanzi ageleza evela kumompompi wethu yikhwalithi enhle kakhulu, enganqunywa kalula ngoku-oda ukuthi kwenziwe izivivinyo ezifanele esiteshini esiseduze senhlanzeko nezifo zezifo. Uma kuvela ukuthi okwethu amanzi ompompi inezinga eliphakeme, imithombo yamanzi yokuphuza ingasetshenziswa.
lezi abaphuzayo eyaziwa nangokuthi izimbiza zamanzi, iyithuluzi elivumela ukusetshenziswa kwamanzi ahlanzekile, apholile ngaphandle kwesidingo sezitsha. Amanzi ahlanzekile futhi anempilo ayatholakala nganoma yisiphi isikhathi, ngamanani amakhulu nakuwo wonke umuntu.
Ukuphuza izikhala zamanzi Zingasetshenziswa ngempumelelo ezikoleni, enkulisa, ezindaweni zokusebenza, emahhovisi nakuzo zonke ezinye izindawo zomphakathi, lapho abathengi nezivakashi, abafundi kanye nabasebenzi bedinga ukuqeda ukoma kwabo.
Lapho ukhetha umthombo wamanzi wokuphuza ofanele, kufanele unake hhayi kuphela ukubukeka kwensiza, kodwa futhi nokusebenza kwayo.
Abaphuza abamahhala bazosebenza ngaphezulu endaweni eyodwa, futhi ulenga enye kwenye. Kwesinye isikhathi uhlelo lokupholisa amanzi aludingekile. Eminye imithombo yamanzi okuphuza ifakelwe empompini owengeziwe owenza kube lula ukugcwalisa isib. Imithombo yokuphuza amanzi ingasebenza nge-pedal yonyawo, inkinombo noma ikhophi. Amanye amadivayisi afakiwe izihlungi zamanzi.
Inzuzo engabazeki yokuphuza imithombo yamanzi yokuphuza kungenzeka ukuthi uwaxhume ohlelweni lokuhlinzekwa kwamanzi kanye nokusetshenziswa kwamanzi agobhozayo, okwenza inkinga yokugcwalisa amabhodlela amanzi inyamalale ngokuphelele, futhi ukusetshenziswa kuyinhlanzeko nemvelo, ngaphandle kokusebenzisa izinkomishi zepulasitiki.
Imithombo yokuphuza yenziwa insimbi ebunjiwe, i-powder enziwe ngenkinombo yethusi yethusi.
Amapuleti angaphambili / angemuva enziwe ngensimbi ye-corten noma yensimbi ehlanganisiwe noma yensimbi engenasici. I-grate yenziwe ngensimbi eyenziwe ngamatshe.
Imithombo yokuphuza ibuya iphelele ne-logo yangokwezifiso yelaser.
zesimanje izitayela ekwakhiweni kwezakhiwo baphoqa abenzi bemithombo yokuphuza amanzi ukuthi basebenzise amaphrojekthi ahunyushelwe kwisitayela esikhona futhi basebenzise izinto ezikhethekile kanye nomklamo wanamuhla kwimikhiqizo yabo. Ukunikezwa kufaka phakathi yomibili imikhiqizo ngemiklamo yasendulo kanye nefomu le-minimalist.
Izindawo zokuphuza zamanzi nazo zinikezelwe ezindaweni ezinjengamapaki, izindawo zokudlala nezingadi.
namuhla imithombo engadini Ngakho-ke, bangakwazi ukufeza ngempumelelo hhayi imisebenzi yobuhle kuphela, ukuhlobisa isikhala, kodwa futhi banganikeza namanzi aphezulu okuphuza.
Amanye amamodeli abaphuzayo zenzelwe nezilwane.
Ama-spas amanzi okuphuza asiza ekunakekeleni imvelo yemvelo ngokunciphisa inani likadoti owenziwe lapho uphuza amanzi asebhodleleni noma lapho usebenzisa izinkomishi zepulasitiki.
Iziphethu zamanzi okuphuza zinikezwa ukuthi zisetshenziswe kumagumbi avaliwe, nasezikhala ezingaphandle. Amadivaysi enziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu futhi ukwakheka kwawo kuvumela ukusetshenziswa okwenele, okuhlanzekile nokunethezekile.
Amanye amadivaysi akuvumela ukuthi uthole amanzi ngokushisa kwasekamelweni, kubanda, ku-carbonated futhi kushise. Isisombululo esifanele kubaqashi abangahlinzeka abasebenzi kalula ngokufinyelela kumanzi okuphuza ahlanzekile.
Isitsha sokuhambisa amanzi se-Pro-Stream. Amanzi abandayo, atshisayo nawobisi. Bona imininingwane eminingi lapha
Iziphethu zamanzi okuphuza avela ezindaweni zasemadolobheni zivumela ukukhushulwa kwendlela yokuphila yemvelo futhi kuthuthukise izindlela zokudla ezinempilo, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuhlanzeka nokusebenzisa njalo amanzi okuphuza ahlanzekile.
Imithombo yamanzi yokuphuza iyasebenza, ukumelana nomonakalo futhi kulula ukuyisebenzisa.
Eminye imithombo yamanzi okuphuza asetshenziswa endaweni yangaphandle ingasetshenziswa unyaka wonke sibonga ukusetshenziswa kwama-valve akhethekile anqanda ukufriza.
Imithombo yanamuhla yokuphuza amanzi - iziphethu zilula ukuyisebenzisa kangangokuba izingane nabantu asebekhulile bangazisebenzisa kalula, futhi ngenxa yokulungiswa kwamanzi okuphuza kuya kobude bomuntu osebenzisa ithuluzi.
5 / 5 ( 26 amavoti )
izesekeli zamanzi entwasahloboumthombo wensimu kakhonkoloukwakhiwa komthombongabe amanzi empompo ayenzekaukuthi amanzi avela emthonjeni aphilileisihlungi sesiphuzoinsimu yomsuka wasengadiniumthombo wamanzi engadiniumthombo wensimu kakhonkolointengo yomthombo engadiniumthombo ongadini wezinganeumthombo omkhulu wengadiinsimu engadini indlela yokwenzaitshe elingumthombo wamatsheumthombo omncane wengadiumthombo wamanje wengadiumthombo okhanyiselwe engadiniumakhi wemithombo engadiniumdwebo wensimu yomdweboinsimu odongeni lwensimuumthombo wamanzana wensimuitshe elingumthombo wamatshekampompi kotshwalaumthombo omncane wengadiabaphuza idolobhaiziphethu zasemadolobheni zalwaumthombo wasengadini emincaneumthombo wamanje wengadipitnikiizimbiza zamanziabaphuzayoiziphuzo zezinganeiziphuzo zezingane ezikoleniiziphuzo zabantuabaphuza izinjaabaphuza izikoleukumboza ophuzayoabaphuzayo emapakiisiphuzo sempiisiphuzo sokuphuza isiphuzoumthombo wamasimu elangaAmanzi angaphathekiizindinganiso zamanzi okuphuzaukuphuza amanzi ePolandukuphuza izimpi zamanziizidingo zamanzi okuphuzaamanzi avela entwasahloboamanzi ehla kumuntu ophuzayoiziphethu zamanziamanzi ompompi angaphandleukuphuza ama-spasentwasahloboisiphethu sokuphuza amanziiziphethu engadiniiziphethu engadiniintwasahlobo ezikoleniiziphethu zamanziumthombo wamanzi okuphuzaamanzi entengo yokuphuza kwentwasahloboukuphuza amanzi entwasahlobo ezikoleni